61 kun 39 soo booqdeyaal ah oo ka kala yimid 245 dal oo loo yaqaan BUMATECH Fair - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 Bursa61 39 Kun 245 Soo booqdeyaal ah oo ka socda BUMATECH Fair
03 / 12 / 2019 16 Bursa, hawlaha, GUUD, Gobolka Marmara, Warqad Hordhac ah, TURKEY
kun oo booqdeyaal carwadii ugu badnayd
Bandhiga Teknolojiyada Qalabka ee BUMATECH kaas oo keenaya Teknolojiyada Wershadaynta ee Birta, Teknolojiyada Warshadaynta Birta iyo Feejignaan Dhab ah oo ka hooseeya hal saqaf, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO) iyo TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. 28 Noofambar - 1 Disembar 2019 inta u dhaxaysa TÜYAP Bursa International Fair iyo Xarunta Kongareeska. Carwadan, oo ay ka muuqato badeecad balaaran oo isugu jirta qalabka mashiinada iyo makiinadaha lagu farsameeyo biraha, laga soo bilaabo softiweerka ilaa alaabada otomaatiga, ayaa la soo bandhigay, si weyn ayey uga qeyb qaadatay horumarinta qeybta isla mar ahaantaana waxay kordhisay iibinta mashiinka.
Kobaca koritaanka-dhoofinta ah ee Qaybtayada Qalabka ayaa sii socon doonta
Gudoomiyaha Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BTSO) Gudoomiyaha İbrahim Burkay, gawaarida, dharka, warshadaha, kiimikada, difaaca iyo hawada, iyo waliba hogaaminta qeybaha kala duwan ee Bursa waxay leeyihiin kaabayaal aad u xoogan, ayuu yiri. waayo-aragnimo ee wax soo saarka Bursa taasoo sameysay oo keliya boqolkiiba 10 ee dhoofinta Turkey iyo qaybta ee dhoofinta la iman kara badan dheeraad ah oo awood u leeyihiin in ay u guuraan kor sheegay in Madaxweynaha Burkay, BUMATECH Fairs 61 xirfadlayaasha ganacsi ka yimi dalalka ka xariiqay in keentay in kulanka adag Bursa. Duqa magaalada Burkay ayaa yidhi, m Waa suurta gal in wadan uu yeesho warshado xasilan iyo dhaqaalo leh jiritaanka warshado mishiin adag. Maanta, warshadeena mashiinka 200 waxay leedahay awood dhoofinta dalka. muhiimadda ugu weyn ee dhaqaalaha dalka Turkiga, qiimo-daray sare iyo technology sameynta warshadaha ee si joogto ah horumarinta our, ayaa sidoo kale u kacay inuu jagada tartan ee suuqyada caalamiga ah. Annaga oo ah BTSO, dalladda ururrada ganacsiga adduunka ee Bursa, waxaan dooneynaa inaan qaybteenna uga sii gudubno yoolka qiimeynta wax soosaarka. Waxa intaa u dheer inaan la kulanno tikniyoolajiyadda cusub ee qaybteena maalgashadayaasha shisheeyaha ah ee loo yaqaan 'BUMATECH Fair, waxaan sidoo kale u horseednaa kobcinta shirkadahayaga leh maskax aqoon iyo aqoon guud leh mashruucayaga' Ur-Ge Mashruuca 'oo ay fuliso hoggaanka BTSO. Haddaanu nahay Bursa, waxaan sii wadaynaa inaan saxeexno saxiixyadeenna natiijooyin muhiim ah oo aan la galno wakiillada waaxdayada. ”
Awood aad u Weyn oo Leh Farsamooyinka Wax Soo Saarka
Shirka dhex-dhexaadka ah ee waaxda wax-soo-saarka mashiinnada, oo ay taageerayaan barnaamijyo ay ka mid yihiin qorshaha horumarka, barnaamijka dardargelinta dardar-gelinta, qorshaha dib-u-dejinta dhoofinta, dhaqaajinta warshadaha teknolojiyadda, ayaa ka dhacay Bursa. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş., oo qiimeyneysa Bandhigga Teknolojiyadaha ee BUMATECH Bursa, kaas oo loo arko inuu yahay cadaalad u sameynta mashiinnada samaynta mashiinnada ee soo jiidata dareenka heerka ka-qeybgalka qoyska ee 80. Maamulaha guud İlhan Ersözlü ayaa yidhi, al Waa awood weyn oo ay waddamadu u leeyihiin teknoolojiyadooda wax soo saar ee u gaarka ah. Waxaan isu keenay waaxda wax soosaarka mashiinka, kaas oo aasaas u ah habraacyada wax soo saarka oo muhiimad weyn u leh qiimaha lagu kordhinayo ee la abuurayo, oo aan la sameyneyno madal aan abuurno. Kulamada laba geesoodka ah ee lala yeeshay dadka ganacsatada ah ee ka kala yimid juquraafi kaladuwan waxay wax weyn ku soo kordhisay dhaqaalaha qaranka iyo dhoofinta carwadayada oo martigelisay alaabada tikniyoolajiyadeed ee u dambeysay ee shirkadaha. Bandhigyadeenna maalinlaha ah ee 4, kuwaas oo suuq muhiim u ah qaybta, waxay muujiyeen awoodda mashiinnada guryaha. 61 ka yimid wadamada ay ka mid yihiin Turkiga, halka gudaha kun 57 39 245 magaalada ka soo dhaweeyay martida ee bumatech 'ku saabsan 1 bilyan oo TL dhow ganacsiga iibka mugga ayaa qeyb ka mishiinka, "ayuu yiri.
Ku kulan 2020
Ersözlü wuxuu usii socday sidan: BUMATECH Bursa Technology Fairs, oo balaariyay shabakadiisa suuq geynta si ay u siiso suuqyo cusub qeybta, waxay martigelin doontaa xiriiro ganacsi oo muhiim ah 26 - 29 Noofambar sanadka soo socda waxayna noqon doontaa goob ganacsi oo wax ku ool ah kuwa doonaya inay furaan suuqyo cusub oo kordhiyaan saamiyadooda suuqa ee jira. diyaariyey. "
61 wuxuu ugu deeqay iibinta mashiinka wefti ka socda dalka
Ciyaaraha Farsamada Qalabka ee BUMATECH Bursa, xafiisyada dibedda ee TUYAP waxay la shaqeyn doonaan Afghanistan, Jarmalka, Austria, Azerbaijan, United Arab Emirates, Bosnia iyo Herzegovina, Bulgaria, Algeria, China, Armenia, Ethiopia, Morocco, Palestine, France, Ghana, Georgia. , South Korea, Croatia, Netherlands, Ciraaq, Ciraaq, Iran, Spain, Israel, Switzerland, Italy, Canada, Montenegro, Qatar, Kazakhstan, Kenya, Republic of North Cyprus, Kosovo, Kuwait, Libya, Lebanon, Mauritius, Hungary, Macedonia Ganacsato abaabulan oo ka kala yimid Masar, Molcava, Monoca, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Sudan, Syria, Saudi Arabia, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Oman, Jordan, Vietnam, Yemen iyo Greece . Iyada oo ay kaqaybgalayaan wufuud ka socota magaalada warshadaha ee 57, xiriiryada ganacsiga ee afarta maalmood ah waxay siinayeen fursado aad u weyn shirkadaha kaqeyb galaya furitaanka suuqyada cusub isla waqtigaasna bixinaya faa iidooyin shaqo.
3. Feet of Bridge ayaa dhaaftay 245 Meter
8 Thousand Date Date 170 Thousand Visitors
Waxaan nahay mid ka mid ah wadamada 10 leh Tareenka Tareenka
Bandhiga ICCI 2014 15 wuxuu hayaa rikoodh uu la socdo kumanaan 621 ah
Bandhig Farsamada Qalabka ee Bursa